Wararkii: Feb 12, 2007
Madaafiicda Qoryaha BM-ka Oo Habeenkii Xalay Ahaa Gil-giley Caasimada Soomaaliya Ee Muqdisho .
Warar is khilaafsan oo ka soo baxaya qaraxii ka dhacay Magaalada Kismaayo..
Maanta oo la soo gebagabeynayo siminaarkii dib u heshiisiinta ee ka socday..
Furux “Hay’adda CRD waxay marin habaabisay heshiiskii Beelaha Sacad iyo Suleymaan”
Siyaasiyiin Cayr oo sheegtay inuu waqtigii ka dhamaaday guddigii Siyaasadda ee..
Cagaaran: deegaanka Cagaaran oo mar kale dagaal dib uga qarxay.
Ma Dhabaa In Ciidamada Dowlada Kmg Ah Oo Raadinaya Hub Ay Galeen Masaajid Iyo Dugsi-qur'aan.
Madaafiicda Qoryaha BM-ka Oo Habeenkii Xalay Ahaa Gil-giley Caasimada Soomaaliya Ee Muqdisho...
Xalay habeenimadii goor dambe ayaa daryanka Madaafiic cul culus ay gil-gileen guud ahaan caasimada muqdisho, kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac.
Rasaasta Qoryaha Lidka diyaaradaha iyo kuwa madaafiicda ayaa is weydaarsadeen kooxo aad u hubaysanaa oo aan la garanayn halka ay ka amar qaataan iyo ciidamada dowlada kmg oo garabsanaya kuwa ethiopia iyadoo ay ku dhinteen labo ruux halka afar kalena ku dhaawacmeen.
Dadka ku dhintay madaafiicdan ayaa ahaa wiil dhalin yaro ah iyo aabihiis oo madfac dusha kaga soo dhacay hoygii ay deganaayeen oo ku yaalay xaafadda Juungal ee degmada Yaaqshiid, iyadoo madfacan gaystay qasaaraha dhimashada ayaan la ogayn ilaa iyo iminka halka uu ka soo dhacay.
Waloow ay jiraan warar sheegaya in madfacan ay dadku ku dhinteen uu kasoo dhacay dhinaca madaxtooyada. C/qaadir Marsho oo ka mid ah dadka deegaanka Jungal degan ayaa warbaahinta u sheegay in madaafiicdaasi kasoo dhacayeen dhinaca Madaxtooyada oo ay degan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia, islamrkaana ay dhaawaceen 3 qof oo kale oo isla qoyskaas ah oo ay ku jirto hooyadii qoyskaas .
Sidoo kale iyadoo habeenkii xalay ahaa ay ahayd habeen ay aad saamayn ugu yeelatay madaafiicda iyo diryanka rasaasta magaalada muqdisho ayaa hal qof oo kale waxa uu ku dhaawacmay xaafadda Ceymiska guri dhismo ku socday ,waardiyiihii ilaalinayey isla gurigaas madfac habow ah oo ku dul dhacay gurigii qabayada ahaa .
Weeraradan iyo madaafiicdan oo aan ahayn markii ugu horaysay ee ay ka dhacaan magaalada muqdisho ayaa hada noqday kuwa aan kala joogsi lahayn islamrakaana si isdaba jooga habeen waliba ay u dhacaan dhimashada iyo dhaawaca oo aan si dhaba loo ogaan karin ayaa isa soo taraya taasoo ay sababsanayaan magaalada caasimada muqdisho oo aan isu war hayn .
Dhinaca kale Kooxo aan la garaneyn ayaa ilaa 3 baasuuke ku weeraray Hotelka Banadir oo ku yaala W/magaalada Muqdisho oo ay dhismaha wadaagaan Idaacadda Banadir, iyadoo halkaasi ay israsaasayn ku dhex martay kooxihii weerarka soo qaaday iyo ilaalada hotelka ,islamrkaana ay iska caabiyeen .
Hotelkan Banadir oo ka mida hoteelada ay degan yihiin saraakiil ka tirsan dowlada kmg ah iyo mas'uuliyiinta dowladdda ah ,islamrkaana ma jiraan wax khasaare ah oo ka dhacay halkaas marka laga reebo xoogaa bur-bur ah oo soo gaaray meelihii ay basukuhu ku dheceen sida ay noo xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah oo ku sugan deegaankaas .
Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya Bamkii shalay lagu Qarxiyey Goob lagu soo dhaweenayey Abaanduulaha Ciidamada Xooga Dalka Soomaaliyeed Cabdi Mahdi waxaana qaraxaasi ku dhintay 6-Qofood oo labo ka mid ah la sheegay in ay ahaayeen Saraakiil ka tirsan Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed, Sidoo kale waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo 20-Qofood oo ka mid ahaa Dadkii halkaasi ku sugnaa ilaa hadda lama garanayo sababihii keenay Qaraxaasi hase yeeshee dad baa waxay sheegeen in uusan ka marneyn arrimo siyaasadeed.
Nin odey ah oo magiciisa qariyey ayaa noo sheegay in qaraxaasi ay ka dambeeyey Ciidamada Dowladda Itoobiya oo doonaya inay Soomaaliya ka baabi’ayaan saraakiishii ciidanka xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Warar kale ayaa waxay sheegayaan in ay ka dambeeyaan dad diidan joogitaanka Dowladda Federaalka iyo ciidamada Itoobiya ee gobolada Jubooyinka, iyadoo magaalada Muqdisho ay ka socdaan dagaalo iyo qaraxyo looga soo horjeedo ciidamada Itobiya iyo kuwa Dowladda Federaalka, kuwaas oo ay maalin walba waxyeelo ka soo gaarto dad rayid ah oo aan waxba galabsan, iyadoo dhawaan urur isku magacaabay dhaqdhaqaaqa Muqaawamada Xoreynta Soomaaliya, waxa uuna sheegay in uu wadi doono qaraxyada iyo dagaalada ay kaga soo horjeedaan wax uu ugu yeeray gumeysiga dalka qabsaday.
Dhinaca kale Wasiir ku xigeenka gaashaandhiga Salaad Cali Jeele ayaa waxa uu sheegay in Dowladda Federaalka ay dhawaan bilaabi doonto hawgal aad u baaxad weyn oo uu sheegay inay ku dagaalami doonaan kooxaha qalalaasaha ka wada Magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in ay soo ogaadeen goobaha iyo xarumaha laga soo abaabulo kooxahaasi. Ciidamo lagu qiyaasay 6-kun oo maleeshiyo ah ayaa ku xareysan Xerada Belidoogle kuwaas oo dhawaan la filayo inay hawgal ka sameeyaan Magaalada Muqdisho, hase yeeshee kooxda muqaawamada ayaa ka digtay.
Beesha oo lahayd hogaan siyaasadeed oo qura ayaa haatan waxaa muuqanaya in Beesha ay ugala qaybsami karo labo garab oo siyaasadeed, iyadoo dhawaan siyaasiyiin ka tirsan Cayr ay Magaalad Adis-Ababa kulan kula soo qaateen Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya Meles Zenawi.
Maanta ayaa la filayaa in Hotel Kaah lagu soo geba-gabeeyo shir-weynihi loogu gogol xaarayey shir dib u heshiisiin soomaaliyeed oo ay mar kale isugu timaado Soomaalidu, waxaana Siminaarkaasi soo qaban-qaabiyey guddiga Dib heshiisiinta qaranka Soomaaliyeed oo gacan ka helaya Hay’adda UNDP.
Kulankaan ayaa waxaa ka qaybgalay Waxgarad, Siyaasiyiin iyo Culama’udiin ka tirsan beelaha ka duwan ee Soomaaliyeed, waxaa la filayaa in maanta laga soo saaro Siminaarkaasi war murtiyeed ku aadan sida loo qaban karo shir dib u heshiisiin oo Soomaaliyeed iyo sida ugu haboon ee hubka looga dhigi karo kooxaha Soomaaliyeed.
Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed ayaa dhawaan ku dhawaaqay in Dowladda Federaalka ay diyaar u tahay inay ka qaybgasho shir dib u heshiisiin ah oo ay soo dabaasho beelah Soomaaliyeed, hase yeeshee sida ay Dowladdu u tarjumaneyso dib u heshiisiinta iyo sida ay beesha caalamku u rabto ayaa ah mid aad u kala duwan.
Xildhibaan Max’ed Jaamac Furux oo ka waramay shirka dib heshiisiinta ah ee uga furmay Magaalada Cadaado Beelaha Suleymaan iyo Sacad ayaa waxa uu sheegay in Hay’adda CRD ay marin- habaabisay qaabka uu u soconayo heshiiskaasi.
“waxay ahayd in labada beelood loo madax-banaaneeyo heshiiskaasi, si ay uga miro dhaliyaan” ayuu yiri Xildhibaan Furux oo sheegay in hay’adda CRD ay dooneyso in heshiiskaasi uu noqdo mid ay iyadu ku lug yeelato kuna faanto.
“Anigu ma diidani shirka, waxaana haatan shirka ka qaybgalay dadkii mudnaa, hase yeeshee waxaana diidanahay qaabka ay Hay’adda CRD u maamuleyso shirkaasi” ayuu yiri Max’ed Jaamac Furux oo sheegay in labada beelood ay baahi weyn u qabaan sidii heshiis dhab ah looga gaari lahaa khilaafka soo jireenka ah ee u dhexeeya.
Kulan ay shalay isugu yimaadeen Waxgaradka, Siyaasiyiinta iyo Culima’udiinka Beesha Cayr ayaa ka dhacay Magaalada Muqdisho, waxaana kulankaasi looga hadlayey sidii ay beeshu ula jaanqaadi lahayd Xaaladda siyaaso ee haatan jirta iyo waliba sida ay uga qayb-qaadan karto dib u heshiisiinta lagu baaqay.
Kulankaan oo uu soo qaban-qaabiyey Suldaanka Beesha Suldaan Muuse ayaa waxaa ka mid ahaa xubnihii ka qaybgalay Cabdi Nuure Siyaad oo sheegay in loo baahan yahay in Beeshu midowdo waxna la qabsato bulshada Soomaaliyeed.
Xubnihii beesha Cayr ee ka qaybgalay kulankaasi ayaa waxay sheegeen in uu dhamaaday guddigii siyaasadii ee Beesha Cayr, dhawaana la filayo in dib u habeyn lagu sameeyo guddigaasi, hase yeeshee waxaa kulankaasi aan ka muuqan siyaasiyiin fara badan oo ka mid ah Beesha Cayr oo uu ku jiray Maxamuud Max’ed Culusow.
Wararkii Axadii hoos ka akhri...
Cagaaran : deegaanka Cagaaran oo mar kale dagaal dib uga qarxay.
Feb 11, 2007: Wararka lagu kalsoonyahay ee ka soo baxay deegaankaasi cagaaran ayaa sheegaya in halkaasi uu ka qarxay dagaal gaystay dhimasho iyo dhaawac badan.
Dagaalkaan oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo kawada tirsan deegaanka puntland ayaa inta la ogyahay waxaa ku dhintay 5ruux halka 10 kalena uu dhaawac ka sogaaray.
Dhaawaca iyo dhimashada dadkaan ayaa waxaa la geeyay magaalooyinka Laascaanood iyo Galkacyo oo ay ka soo kala jeedaan labada maleeshiyo beeleed ee halkaasi ku dirirayay maalintii labaad.
waxaa jiray ciidamo ka tirsan maamulka puntland iyo odayaal dhaqamedyo halkasi loo diray si ay nabad ugu soo dabaalaan una soo afjaraan dhibaatada halkaasi ka taagan walow ay hadana dagaalkii uu dib u qarxay ilaa iyo hadana marjiraan warar rasmi ah oo halkaasi laga heliko maadaama ay tahay dhul for oo miyi ah ayna jirinwax isgaarsiin ah oo lagula xiriiri karo.
balse dadka socotada ah ee ka imaanaya deegaanka miyiga ah eee halkaasi ka agdhaw ayaa cadaynaya in uu dagaalku dib u qarxay lamaqlayayna rasaasta fudud ay is waydaarsanayaan labada maleeshiyo beeleed.
Dagaalka ayaa markii hore ka bilwday dhul miyi ah ee beeli ay damacday in ay magaalayso kadib markii ay isku dayday in ay beeli halkaasi ka bilwodo barraag lagu shubto biyaha halka beesha kalena ay hor istaagtay hamiga beesha kale ee ay wadatay iyada oo beesha diiday in halkaasi laga qodo baraag ay ku andacooday in ay sababayso magaalaynta dhulkan ku wacan xoolo daaqsinka in uu aakhirka isku badelo xaaluf sida horay looga arkay dhulal badan oo banaanaa oo amrkii lamagaaleeyay noqday kuwo xaaluf garooba ooo ka tagay xoolo daaqsinkii hadana intii yarayd ee xoolaha u soo hartay ay rabaan dadku in ay ka dhigaan magaalooyin iyada oo deegaano badan oo banaana ay yihiin kuwo maran aana ku haboonayn xoolo daaqsinka balse la beegsanyo meelaha ku haboon xoolo daaqsinka waa sida ay beeshaasi sheegtay.
Ma Dhabaa In Ciidamada Dowlada Kmg Ah Oo Raadinaya Hub Ay Galeen Masaajid Iyo Dugsi-qur,aan.
Feb 11, 2007: Weerarada iyo qaraxyada lala beegsanayo ciidamada dowlada kmg ah iyo weliba kuwa Ethiopia ayaa waxay sii kor dhinayaan xaalada amaan xumo ee magaalada muqdisho ,iyadoo maanta ciidamada dowlada kmg ah qaar ka tirsan ay maanta dar-dar hub baaris ah kasameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho .
Xaafadda Sheellare iyo Sariindi ee Degmada Xamar jajab ee agagaarka dekadda weyn ee muqdisho ayaa waxaa maanta waxaa soo buux dhaafiyey ciidamada dowlada kmg ah oo halkaasi kabaarayey hubkanoocyadiisa kala duwan.
Sidoo kale ciidamada dowlada kmg ah oo baaritaanka hubka waday ayaa waxa ay galeen masaajid ku yaalla xaafadaasi ku yaala iyo weliba dugsi Qur’aan sida ay saxaafada u xaqiijiyeen goob joogayaal halkaasi ku sugnaa oo diiday in magacooda la shaaciyo .
Si kastaba ha ahaatee ciidamada dowlada kmg ah iyo weliba kuwa jaalkooda ah ee Ethiopia ayaa miciin ka biday inay hubka ka raadiyaan masaajidada iyo weliba xarumaha dugsi qur,aanka lagu barto .
Wararkii: Feb 11, 2007
Weeraro Xalay Loo Gaystay Xarumo Fariisin U Ah Ciidamada Dowlada Kmg Ah Iyo Kuwa Ethiopia..
Dagaal Kharaar oo saaka dib oga bilowdey deegaanka cagaare oo uu shalay dagaal ku dhex marey labo beelood.
Itoobiya oo weydiisatey Turkigu in uu Ciidamo u diro Soomaaliya
Melez Zenawi oo walwal ka muujisay qaraxyada iyo…
Dowladda Federaalka ah oo ka hadashay Qaraxyadii shaley ka dhacay.
Dad fara badan oo bilaabay inay ka qaxaan Qaraxyada ka soo cusboonaadey..
Warbixin ku saabsan qaraxyadii Sabtidii Gilgiley Magaalada Muqdisho ..
Mareykanka oo doonaya in dalka Yemen Martigeliso kulanka dib u heshiisiinta ...
Shariif Xasan oo ku sii jeeda dalka Yaman ..
Tacaddigii Saami Xaaji iyo Xabsiga Guantanamo: Munaasabad loogu Boroordiiqayey oo ka dhacdey Muqdisho
Kismaayo: Bombaano Lagu Qarxiyey Goob ay ka Khudbaynayeen Saraakiil....
KISMAAYO: Feb 11, 2007: Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa tibaaxay in bambaano lagu qarxiyey fagaaraha beerta xorriyada oo ay ka khudbayneynayeen madax sare oo ka tirsan DFKMG, waxaana warku intaas ku daray in afar qof ay halkaas ku dhinteen, ilaa 20 qofna ay ku dhaawacmeen sida ay werisey hay'adda wararka ee Reuters.
Reuters waxay sheegtay in dadka dhaawacmay uu ka mid yahay Generaalka booliska Axmed Maxamed oo ay lug iyo wajiga kaga dhaceen firikii qaraxa. Waxa kale oo dhaawacmay Afar kornayl oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya.
Barre Aaden Shire, wasiirka gaashaandhigga DFKMG oo jooga magaalada Baydhabo waxaa laga soo xigtey in uu xaqiijiyey in dad ku dhinteen qaraxa ka dhacay Kismaayo.
Howl-gallo baaritaan ayaa ciidamada dowlada kmg ah iyo kuwa Ethiopia ka bilaabeen agagaarka Isbital Banadir ilaa isgoyska zope ka dib markii xalay halkaasi ay ka dheceen israsaasayn xoogan oo u dhaxaysa kooxo hubaysan iyo ciidamada dowlada kmg ah iyo weliba kuwa ethiopianka ah .
Weeraradan oo loo adeegsaday qoryaha madaafiicda ayaa lala beegsaday xarunta Villa Baydhabo oo fariisin u ah ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiooia, iyadoo ka dibna halkaasi laga maqlayey rasaas xoogan oo la is waydaarsanayey lama oga ilaa iyo iminka khasaaraha ka dhashay qararxyadaas oo ay israsaasayntu weheliso.
Wadooyinka ku dhow dhow xaafadaha isgoyska zope ilaa xaafada Buulo Xuubey ayaa saaka xiran iyadoo halkaasi ay isku gadaameen ciidamada dowlada kmg ah iyo weliba kuwa Ethiopia islamarkaana aysan jirin wax gaadiid ah oo saaka ka shaqaynaya deegaankaas .
Sidoo kale dhaq-dhaqaaqa xaafadahaas ayaa saaka yaraaday kadib markii ay ciidamada dowlada kmg iyo weliba kuwa taageeraya ee ethiopia ay diideen xataa inay dadweynaha lugayyaan, islamarkaana ay sidaa u yaraadeen shacabka ku dhex soconaya deegaanka zope ilaa buulo xuubey .
Dagaal qaraar oo shalay ku dhexmaray labo beelood deegaanka Lagu magacaabo Cagaarre oo u dhow degmada burtinle ee gobolka nugaal ayaa waxaa uu saaka dib oga bilodey halkaasi iyada oo uu gaystay khasaare naf iyo maalba leh.
Dagaalkan u dhaxeeya labada beelood oo saaka dib oga bilowdey meelihii uu shalay ka dhacay ayaa waxaa ku nafwaayay 5 nin halka dhaawucuna uu gaarayo dhowr, dagaalkan ayaa waxa uu ka bilowdey meel barkad biyood laga qadoyay waxaana uu muranku ka yimid meesha ceelka laga qodoya oo ay qolona diidan tahay qolona ay rabto in ay meesha ceel ka qadato.
Dagaalkan ayaa saaka dib u bilowdey ayaa ilaa iyo haatan socda (markii aan warkan qoreyney) sida ay noo xaqiijiyeen dad ku sugan degmada buurtinle oo u dhow deegaanka cagaare oo ah meesha ay labada beelood ku dagaalamayaan.
Dagaalkan oo ay odayaal iyo nabadoono iyo wax garad fara badan usoo ruqaameen maalintii shalay oo soo gaarey degmada burtinle ee gobolka nugaal ayaan weli ku guulaysan in ay joojigaan dagaalka oo ay kala dhex galaan labada beelood ee dagaalamaya, laakiin arrintaas weli ku guda jira sidii loo joojin lahaa dagaalkaas.
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Meles Zenawi, ayaa waxa uu ra'iisul wasaaraha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, weydiistey in dalka Turkigu uu tixgelin siiyo in uu ka qayb qayb qaato ciidamo Qaramaad Midoobey ah oo loo diro Soomaaliya, haddii lagu guul daraysto ciidamada Afrikaanka ee loo dirayo Soomaaliya, sidaas waxaa qoray jariidada Turkish Daily News, wararkeedii Sabti Feb 10, 2007. Zenawi waxa uu Turkiga booqasho ku tegey Arbacadii la soo dhaafay. Waxaa warku intaas ku daray in sarkaal ka tirsan xukuumada Turkigu uu jariidada Turkish Daily u sheegay in dalka Turkigu uusan danaynay in uu ciidamo u diro Soomaaliya. Halkaas waxaa ka muuqada in Itoobiya ay u muuqato mid ka rajo dhigtay in Soomaaliya loo diro Ciidamo Nabad Ilaalin ah oo Afrikaan ah oo wax ka qaban kara xaalada cakiran ee Soomaaliya. [Akhri:Ethiopia requests Turkish soldiers in Somalia ]
Wararka naga soo gaaraya magaalada Adis-Ababa ee dalka Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in Dowladda Itoobiya ay si weyn walwal uga muujisay qaraxyada iyo weerarada ka soo cusboonaaday dalka Soomaaliya xili ay ciidamada Itoobiya xoogooda ka sii baxayaan.
Mucaaradka dalka Itoobiya ayaa maalmahan waxaa ka soo yeerayey hadalo kulul oo Dowladda Meles Zenawi loogu sheegayo in markii hore ku qaldamay in Ciidamada Itoobiya ay galaan gudaha dalka Soomaaliyaa, waxay kaloo sheegeen in Dowladdu ay mas’uul ka noqon doonto askarta ku dhimaneysa gudaha dalka Soomaaliya, iyagoo sheegay in Meles uu garab siiyey mid ka mid ah garabyada isaga soo horejeedda Soomaaliya.
Mucaaradku waxa uu Dowladda Itoobiya ka codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada Itoobiya looga soo saaro Soomaaliya. “Waan ogeyn in Maxaakiimtu aysan halis ku aheyn dalka Itoobiya, balse Meles waxa uu fuliyey danaha dalka Mareykanka oo uu ku helay malaayiin Doolar oo aan weli gaarin ciidamada Itoobiya” ayey yiraahdeen qaar ka mid ah mucaaradka dalka Itoobiya oo sidoo kale aad uga xumaaday dad u dhashay Oromo lagu xasuuqay dalka Soomaaliya, kuwaas oo mudo 30 sano ah xaqooti ku ahaa dalka Soomaaliya, kuwaas oo horey uga cararay taliskii Mingiste.
Dowladda Itoobiya ayaa haatan qorsheyneysa sidii ay u bedeli lahaa siyaasadda Dalka Soomaaliya, waxaana soo gaaraya cadaadis. Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya Meles Zenawi ayaa sheegay in ciidamadiisu aysan sugi doonin ciidamada nabad ilaalinta ah ee imaanaya dalka Soomaaliya, isagoo sheegay in Ciidamada Itoobiya ay gebi ahaanba ka bixin doonaan dalka Soomaaliya. Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya Meles ayaa waxaa maalin walba gaaraya fariimo la xiriira dagaalada ka soo cusboonaaday gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan Magaalada Muqdisho oo maalin walba lagu weerarayo Ciidamada Itoobiya, iyadoo Dowladda Federaalka ahna ay dib ugu guraneyso Magaalada Baydhabo ee gobalka Baay.
Dowladda Mareykanka oo ka walwalsan arrimaha ka soo cusboonaadey Magaalada Muqdisho..
Dowladda Mareykanka ayaa la yaab ku noqotay markii shaashadaha caalamka laga daawaday dad Soomaali ah oo banaanbax ka sameeyey magaalada Muqdisho, kuwaas oo si aad ah uga soo horjeeda ciidamada Itoobiya iyo waliba Ciidamada shisheeye ee la damacsan yahay in la keeno dalka Soomaaliya.
Banaanbaxaasi waxaa hadalo ka jeediyey dad isku magacaabay (Dhaqdhaqaaqa Muqaawamada Shacabka Soomaaliyeed), waxayna halkaasi ka ballanqaadeen in ay sii wadi doonaan qaraxyada iyo dagaalada ay kula jiraan cidamad Itoobiya.
Dowladda Mareykanka ayaa waxaa la sheegay inay aad uga walwalshay in Muqdisho mar kale isku bedesho goob halis ah oo ay sheegeen in ay ku xoogeysanayaan waxa ay ugu yeereen kooxaha argagixisada ah, iyadoo Dowladda Federaalka ah ay wax ka qaban la’ dahay ama ay joojin la’ dahay qaraxyadaasi.
Dowladda Mareykanka ayaa horey lacag ay u bixisay oo loogu talagalay dib u dhiska dalka Soomaaliyeed, waxay maalintii shalay ahayd ku dartay 60-Milyan oo ay sheegtay in ay ugu talagashay ciidamada Nabad ilaalinta, hase yeeshee Dowladihii horey u ballanqaaday ayaa waxay sheegeen in aysan ku dhiiran Karin inay hawl nabadeed ka sameeyaan Soomaaliya.
Wasiir ku xigeenka Gaashaandhiga Salaad Cali Jeele ayaa maalintii sabtida ahayd ka hadlay qaraxyadii isdaba jooga ahaa ee shalay harqiyey Magaalada Muqdisho oo ay waxyeelo ka soo gaartay dad badan, waxa uuna wasiir ku xigeenku sheegay in Dowladdu iska difaacday kooxahaasi oo uu sheegay inay doonayeen in ay carqaladeeyaan Magaalada.
Wasiir ku xigeenku waxa uu sheegay in Dowladda Federaalka ah u caddaatay in Magaalada Muqdisho ay ku soo bateen wax uu ugu yeeray kooxaha argagixisada ah, waxa uuna sheegay in Dowladdu ay dagaal xoog leh la geli doonto kooxhaasi, kaddib markii ay la tashiyo la sameeyeen waxgaradka ku dhaqan Magaalada muqdisho.
Ciidamada Dowladda Federaalka ayaa haatan u muuqda kuwi ku sii uruuraya xarumahoodii iyagoo ka cabsanaya in ay weeraro kaga yimaadaan kooxaha muqaawada-mada ah.
Iyadoo magaalada Muqdisho maalmahan ay wehel ku noqotay qaraxyada iyo dagaalada ka soo cusboonaaday ayaa haatan dad fara badan waxay bilaabeen in ay ka qaxaan magaalada Muqdisho iyadoo dadkaan xoogooda ku baxayaan deegaanada ku dhow magaalada Muqdisho, gaar ahaan Lafoole iyo Ceelashada Biya.
Dadka qaxaya ayaa waxaa u badan qoysas u adkeysan waayey qaraxyada iyo madaafiicyada ay is weydaarsanayaan labada dhinac, iyadoo maalin walba ay dagaaladaani ku dhaawacmaan dad fara badan oo aan waxba galabsan, kaddib markii ay guryahooda ugu tageen hoobiyayaal la tuurayey.
Magaalada Muqdisho ayaa waxay 16 sanadkii soo martay dhibaatooyin kala duwan oo marnaba heer soomarayey, ilaa iyo aaqiritaankii ciidamo Itoobiyaan ah soo galaan dalka oo ay yimaadaan Magaalada Muqdisho, markaas oo ay bilowdeen qalalaasooyin
Warbixin ku saabsan qaraxyadii Sabtidii Gilgiley Magaalada Muqdisho ...
Waxaa maalintii shalay (Sabtidii) ahayd Magaalada Muqdisho gilgilay madaafiic iyo qaraxyo qaarkood lala beegsaday goobo ay ku sugan yihiin ciidamada itoobiya iyo kuwa Dowladda Federaalka ah.
Madaafiicdaasi ayaa waxaa ka mid ah goobihii ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha magalada Muqdisho oo la sheegay inay ku dhaawacmeen labo qofood, sidoo kale madfac kudhacay hotel Kaah oo uu ka socday shirka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ayaa isna waxaa ku dhintay gabar yar oo taagneed banaanka hore ee hoteelka, hase yeeshee hawshii shirkaasi ma is taagin. Sidoo kale madaafiicdaani waxay ku dhaceen agagaarka Kuliyaddii Jaale Siyaasd iyo agagaarka Dayniile waxaa ku dhintay afar qofood, sidoo kale madfac ayaa isna ku habsaday Suuqa xoolaha oo isna gaystay dhaawac afar qofood ah.
Shalay ayay ahayd maalintii ugu qaraxyada badneyd magaalada Muqdisho, waxayna qaraxyadaani maalin kadib ku soo beegmeen iyadoo maalintii doraad ahayd urur isku magacaabay dhaqdhaqaaqa muqaawamada xoreynta Soomaaliya uu sheegtay qaraxyadii iyo weeraradii lagu hayey magaalada Muqdisho, waxaa kaloo uu sheegay in uu sii wadi doono weerarada uu ku hayo ciidamada itoobiya tan iyo inta ay ka baxaan magaalada Muqdisho.
Dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho ayaa iyagu aad uga walwalsan dhibaatadaasi, waxana codsadeen in goobaha rayidka laga joojiyo madafiicda.
Dowladda Federaalka ah oo xilkii ka qaaday Gen Ismaaciil Qaasim Naaji...
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo waxay sheegayan in dowladda Federaalka ah ay xilkii ka qaaday taliyihii ciidamada xoogga Dalka Soomaaliyeed Ismaaciil Qaasim Naaji, waxaana loo magacaabay Gen. Max’ed Xuseen (Ina-Libaax-San-ka taabte).
Wereegto uu saaray Ra’isul Wasaare Cali Max’ed Geeddi ayaa xilkaasi looga qaaday taliyaha, lamana faahfaahin sababaha looga qaaday, balse warar ayaa waxay sheegayaan in uu taliyaha codsaday in laga qaado xilka, iyadoo la sheegay in uu xanuunsan yahay, waxaana la sheegay in taliyaha loo magacaabay Safiirka Cumaan u fadhiya Soomaaliya.
Ra’isul Wasaaraha ayaa maalmahan waday magacaabista Wasiiro iyo wasiir ku xigeeno iyo waliba agaasimayaal iyo danjirayaal, mar la wareystayna waxa uu sheegay Ra’isul Wasaruhu in uu dedejin doono dardargelinta hawlaha si ay u dhameystirmaan haygalka dowladnimo.
Ra’isul Wasaaraha ayaa waxay dhaleeceyn uga timid qaar ka mid ah dadkii uu xilka ka qaaday, waxaana ugu cadcad wasiirkii hore ee caafimaadka C/risaaq Sheekh Yuusuf oo iysagu warqad ashkato ah u gudbiyey Baarlamaanka Federaalka ah.
Dowladda Mareykanka oo iyadu maalmahan ku hawlaneyd sidii xal loogu heli lahaa arrimaha Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in ay uu aad u daneynayo in shirka Dib u heshiisiinta qaranka Soomaaliyeed lagu qabto dalka Yemen si halkaasi loogu dhiso dowlad Soomaaliyeed.
Mareykanka ayaa hadalkaan ka sheegay shir maalmahan ka socday dalka Tansaaniya oo ay isugu yimaadeen kooxda lagu magacaabo Contact Group, waxaana la filayaa in dalka Yemen ay dhawaan booqdaan kooxdaasi dalka Yemen si ay Dowladda Yemen iskula meel dhigaan qaabka ugu haboon ee shir dib heshiisiin ah loogu qaban karo shacabka Soomaaliyeed.
Dalka Yemen ayaa haatan waxaa ku sugan mas’uuliyiin ka tirsan Maxaakiimta Islaamiga ah oo ugu horeeyo guddoomiyihii guddiga Fulinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isagu martiqaad ka helay dowladda wadankaasi.
Dowladda Yemen aya iyadu beenisay warar ay faafiyeen saxaafadda oo sheegayey in Sheekh Shariif uu magangalyo siyaasadeed weydiistay dalkaasi, hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee Yemen ayaa waxa uu sheegay in wararkaasi ay ahaayeen kuwo aan sal iyo baar toona laheyn, isagoo sheegay in Sheekh Shariif uu wixii dib u heshiisiinta ah ka dhex wado dalka Yemen si loo dhameeyo xaaladda murugsan ee Soomaaliya.
Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku sii jeeda dalka Yemen, halkaas oo la filayo in uu kulamo kula yeesho guddoomiyaha golaha fulinta ee Maxaakiimta Sheekh Shariif.
Shariif Xasan ayaa la filayaa in uu Sheekh Shariif la soo qaado sida xal loogu heli karo xaaladda Soomaaliya, iyadoo Shariif Xasan uu horey u ballanqaaday in uusan marnaba ka caajisi doonin dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed, waxa uuna sheegay in uu weli yahay guddoomiyaha rasmiga ah ee Golaha Baarlamaanka.
Shariif Xasan ayaa waxaa dhawaan xilka ka qaaday baarla-maanka waxaa lagu bedelay Sheekh Aadan Madoobe, iyadoo marka uu tago Shariif Xasan Magaalada Sanca iyo dalka Yemen uu Dowladdaasi la soo qaadi doono sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha ayaa waxaa horey u sii raaci doona toban xubnood oo ka tirsan Golaha Baarlamaanka oo weli ku sugan dalka Jabuuti.
Ciyaaryahan Samuel Eto'o iyo Soomaali xagee iska soo galaan?
Waxaa maanta ku soo qaadanaynaa bogeenna Falanqeynta Taariikhaha ciyaartoyda Dunida Laacibka Weyn ee Weerarka uga ciyaara kooxda Barcelona iyo Xulka Qaranka Cameroon ee Magiciisu cirka isku shareeray ee Samuel Eto'o oo aan idinkaga hayno macluumaad dheeraad ah.
Xidiggan oo magiciisa oo buuxa uu yahay "Samuel Eto'o Fils" waxa uu 10-kii March 1981-kii uu ku dhashay halka lagu magacaabo Nkon oo ku taalla Dalka Cameroon, dhererkiisu waa 1.79m, (5'11"), waxaa lagu naanaysaa Pantera Negra (Black Panther/ Shabeel-kii Madoobaa!!), waxa uu weeraryahankani hibo u leeyahay Boos qaadashada marka ay baadi goobayaan meel ay Kubadda u tuuraan iyo Laadadkiisa awoodda leh, taasoo keentay in 3-sano oo xiriir ah uu ku guuleysto Xiddignimada Q/Afrika. Akhri qoraalka oo dhan....
Warar ku saabsan Sanaag (Ceerigaabo oo nin ku dhintey, Badhan oo heshiis lagu gaarey iyo Xingalool oo maamul loo sameynayo iyo Dadaalka dhuxul joojinta)
Ceergaabo:- Magaalo madaxda Gobolka Sanaag ayaa maalintii shalay ahayd waxa ku geeryoodey nin dhallinyaro ah, halka mid kalena ay dhibaato xoog lihi soo gaadhey, arintan ayaa markii hore dadweynuhu aad ugu wareereen sababta ka danbaysey. Akhri....
Qaraxyo Lala Beegsaday Hotel Global